♥♥♥ ♥♥ အလွမ်းမြို့လေး♥♥ ♥♥♥: ♥♥♥အတိတ်စာမျက်နှာဟောင်းများဆီသို့♥♥♥
ဒီနေ့ သူနဲ့ကျမတကယ်ဘဲ လမ်းခွဲဖြစ်သွားပြီ။ တကယ်ဘဲ ဝေးကွာသွားပြီဆိုတဲ့အသိတစ်ချက်က ကျမ ရင်ထဲကိုရိုတ်ခတ်ယုံမက ကျမ တစ်ကိုယ်လုံးကိုနာကျင်စွာ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့က ကျမ အတွက်တော့ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပေါ့။
ကျမတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ကူးလာတဲ့လူကူးမျဉ်းကြားလေးရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်အခြမ်းမှာ လူနှစ်ယောက်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီလူနှစ်ယောက်က မှန်လုံစားသောက်ဆိုင်ထဲကို ဝင်သွားခဲ့ပြီ နောက်ကျောပြင်ကနေ လှမ်းမြင်ရတာမို့ ကျမ ဒီလူရဲ့ဘေးနာက ကျမနေရာမှာရှိနေတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ပိုသိချင်တာခဲ့တယ်။ ကျမ သူ့အပေါ်ထားခဲ့တဲ့ ချစ်စိတ်တွေကြောင့် ရပ်နေတဲ့နေရာမှာ အလှဲထိုးခံရသလို ခံစားမိပြီး ကျမ ရောက်နေတဲ့နေရာမှာရပ်မိပြီး တွေဝေနေမိတယ်။ ကျမ ဘေးနားမှာတော့ ကျမနဲ့အတူ သူငယ်ချင်း တွယ်တာ ကရှိနေတော့.... ကျမလက်ကိုဆွဲပြီး.. မိုး သွားကြမယ်လေ ဘာရပ်လုပ်နေတာလဲ ဒီနေရာမှာ ...တော်ကြာ.... ရထားနောက်ကျ နေဦးမယ်လို့ ပြောလာတော့ ကျမ သတိတစ်ချက်ပြန်ဝင်လာပြီး တွယ်တာမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ကျမ သူ့ကိုမေးလိုက်မိတယ်။ နင်တကယ် မမြင်တာလား ငါခံစားရမှာစိုးလို့ တမင်တကာ နင်မပြောတာလားဆိုတော့ တွယ်တာက နင်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့။ ကောက်ခါငင်ကာ ဘာဖြစ်သွားတာတုန်း ငါကဘာကိုမြင်ရမှာလဲလို့ တွယ်တာက ကျမကို ပြန်မေးလိုက်တယ်။ အဲတာကို ငါသိချင်တယ် သူငယ်ချင်း။ တကယ်ဆို သူငါ့ကို မချစ်တော့ဘူးဆိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပေါ့။ ငါကိုယ်တိုင်က အချစ်ကံခေသူလို့ ယူဆခံယူပြီး သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးမှာပါ။ ခုတော့......
ကျမတွယ်တာကို ဘာမှမရှင်းပြတော့ဘဲ သူ့လက်ကိုဆွဲပြီး ခုနကျမတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ကူးလာခဲ့တဲ့ လူကူးမျဉ်းလေးဘက် မျက်နှာပြန်မူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ငါနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါနော်လို့ တွယ်တာကို ကျမ တောင်းပန်လိုက်တော့ တွယ်တာက အဖြစ်အဖျက်ကို ရိပ်မိသွားပုံပေါ်ပြီး ....နင် ...သူ့... ကိုတွေ့လိုက်လို့လားလို့ ကျမ ကိုပြန်မေးလာပါတယ်။ ကျမလည်း ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခါတိုင်းလို တစ်ယောက်ထဲ တွေ့တာမဟုတ်တော့ ငါ့ရင်ထဲမီးစထိုးသလို ပူလောင်နေတယ်။ နင်တို့တွေ့ခဲ့တုန်းက ငါ့ကိုဖုန်းဆက်ပြောတိုင်း ငါမယုံခဲ့ဘူး။ ငါမယုံခဲ့ပေမဲ့ ငါသူ့ကိုအမြဲ လေ့လာကြည့်နေပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ငါကိုယ်တိုင် ငါ့မျက်လုံးနှစ်လုံးနဲ့ မြင်ခဲ့ရပြီမို့ ငါနင်တို့ကို ပြောမှားတာတွေ အတွက်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ အဲတာတွေနောက်မှ ပြောကြမယ်။ အခုငါသိချင်တာ.... သူဘာလို့ငါ့အပေါ် ဒီလို လှည့်စားရက်တာလဲ? ငါ့မှာဘာအပြစ်တွေရှိလို့... ငါ့မိသားစုတွေထဲ အတင်းတိုးဝင်..... ငါ့အစ်ကိုတွေနဲ့ ရင်းနှီအောင်မိတ်ဖွဲ့ခဲ့ အခု အဆင်ပြေနေခဲ့ပြီးမှ သူဘာလို့ဒီလို လုပ်ရတာလဲဆိုပြီး ကျမ တွယ်တာ့ကို ပြောလိုက်တယ်။
တွယ်တာကလည်း မဲ့ပြုံးလေးပြုံးပြီးကျမကို နင်အခုဘာလုပ်မလို့လဲ .... သူတို့နှစ်ယောက် ဝင်သွားတဲ့ဆိုင်ထဲ လိုက်ဝင်မလို့လား။ ငါတော့ဗိုက်ပြည့်နေပြီ။ ဘာမှမစားနိုင်တော့ ဘူးနော်လို့ပြောလာတယ်။ အရေးထဲ တွယ်တာက ငတ်ကြီးကျနေသေးတယ်။ ဒီမှာက ရည်းစားလူလု အူနုကျွဲခတ်.... ဖြစ်နေတာတောင် သူက.... တစ်ခုခုပြောလိုက်ပြီဆို စားဘို့ဘဲ အမြဲတွေးတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကိုကျမက အေးပါ .. ငါလည်း ဘာမှဝင်မစားပါဘူး။ ခဏလေးတော့ ငါသူတို့စုံတွဲ မျက်နှာလေးကို မြင်ချင်လို့ပါဆိုပြီးပြောရင်း မျဉ်းကြားလေးမှာ မီးစိမ်းလာတော့ ကျမတို့အမြန်ဖြတ်ကူးရင်း စားသောက်ဆိုင်ရှိရာ တစ်ဖက်ကမ်းကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်။
ဆိုင်ရှေရောက်တော့ တွယ်တာကကျမကို ဆိုင်ထဲမှာမို့သတိရှိဘို့ မှာချိန်မရလိုက်ပါဘူး။ ကျမက မြန်ဆိုသလို ဘယ်လိုလုပ် အဲဒီဆိုင်ထဲရောက်သွားမှန်းကို ကျမကိုယ်တောင်ကျမ မသိလိုက်ပါ။ ဆိုင်ထဲရောက်တော့ ကျမသူတို့ထိုင်တဲ့ ခုံနားကိုအရောက်သွားလိုက်တယ်။ ခုံပေါ်မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရယ် ခွက်တစ်ခွက်ထဲ ပိုက်နှစ်ချောင်းတပ်ထားတဲ့ အအေးတစ်ခွက်ရယ် ပေါင်မုန့်အသားညှပ်တစ်ပွဲရယ်နဲ့ အမျိုးသားကိုင် ပိုက်ဆံအိတ်လေးတစ်လုံးရယ်ဘဲ ရှိနေတာ။ ကျမအဲဒီစာပွဲရှေ သွားရပ်လိုက်တော့ ထိုင်နေတဲ့ ကောင်မလေးကလည်း ဘာမှမသိရှာတော့ ကျမတို့ နှစ်ယောက်ကို ငေးကြည်နေမိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွယ်တာက ကျမရှာတဲ့လူကို ဆိုင်ထဲမတွေ့တော့ ကျမကိုဘယ်မှာလဲ နင့်လူ...ဆိုပြီးမေး လာတယ်။ ကျမက ဒီဆိုင်ထဲမှာသူ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သေချာတယ်လို့ ကျမတွယ်တာ့ကို ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကောင်မလေးထိုင်တဲ့ စာပွဲပေါ်က ပိုက်ဆံအိတ်က ကျမနဲ့အတော်ကို ရင်းနှီးဖူးသလို ငွေလိုတိုင်း ကျမ ချွေးနည်းစာနဲ့စုထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေ ဖြည့်ထည့်ပေးနေကျမလို့ ကျမသိနေတယ်။
သူဒီဆိုင်ထဲမှာဘဲ ရှိနေတယ်ဆိုတာ တွယ်တာကို ပြန်ပြောလိုက်တော့ ကျမဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ မျက်လုံးလေးနဲ့ တွယ်တာကျမကို ကြည့်နေတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းအစုံမှာလည်း ကျမဒေါသတွေ ဆိုင်ထဲမှာ အရှက်မဲ့စွာ ပါက်ကွဲပစ်မှာ စိုးရိမ်နေသလို ဖြစ်နေတယ်။ တကယ်ဆိုရင် ဖြစ်လည်းဖြစ်မိကြမှာပါ။ သစ္စာမရှိတဲ့ချစ်သူကို ခုလိုကိုယ်မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်ရတော့ အချစ်မျက်ကန်းဘဝနဲ့ အသိတွေအမှောင်ချပြီး လူတွေအရှက်မဲ့စွာ လုပ်မိကြမှာပါ။ အချစ်နဲ့ပါတ်သက်လာရင် လူတွေက အနည်းနဲ့အများ မိုက်မဲဖူးကြတာဘဲလေ။ ဆိုင်ထဲမျက်လုံးဝှေကြည့်တော့ သူ့ကိုမမြင်ရတော့ ကျမဖုန်းကိုထုတ်ပြီး သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်။
အစ်ကို.... အခုဘယ်မှာလဲလို့ ကျမ တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ မေးလိုက်တော့ သူက... အစ်ကို အလုပ်ထဲပြန်ပြီလေ ...မိုး.... အစ်ကို့လက်က ဒဏ်ရာက အရမ်းနာနေတော့ အပြင်မှာကြာကြာ မလည်ချင်တော့ဘူးတဲ့။ ကျမ စိတ်တွေမပြိုလှဲကျအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းပြီး မီးစထိုးခံရသလို ပူလောင်နေတဲ့ နှလုံးသားရင်ခွင်ကို ခဏတာအအေးခန်း ပို့ထားလိုက်တယ်။ သူလည်း ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံမယ်လို့ မထင်ထားတော့ ...ကျမကိုခုလို ဖုန်းထဲကနေ လိမ်လိုက်တာနေမှာပါ။ ကျမလည်း သူ့ကိုဖုန်းချပြီး ဒေါသတွေထွက်နေတဲ့ မျက်နှာရယ် ဆုံးရှုံးလှဲပြိုခြင်းခံရတဲ့ စိတ်တွေကို မာနဆိုတာလေးနဲ့ ထိန်းပြီး ... သူ.... သန့်စင်ခန်းက ထွက်အလာကိုစောင့်နေ လိုက်တယ်။
ခဏအကြာမှာ သူ...သန့်စင်ခန်းမှ ထွက်လာတော့ ရုတ်တရက် ကျမနဲ့တွယ်တာကို သူ့တို့မှာထားတဲ့ စားပွဲရှေမှာရပ်နေတာ မြင်လိုက်ရတော့ သူ...ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်သွားပြီး တော်တော်လေး အံ့သြသလို တုန်လှုပ်သွားတယ်။ သူဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းမသိတော့ဘဲ .....ကျမကို... .နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ စကားက ...မိုး.... ထိုင်လေဘာစားမှာလဲတဲ့။ သူ့အမေးကြောင့် ကျမ ဒေါသတွေ ပိုထွက်လာပြီး ကျမသူ့ကို ပြန်ဖြေလိုက်တာက. .. ကျမ .. စားဘို့.. .ဒီဆိုင်ထဲဝင်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ အစ်ကို.... ကျမ အပေါ်ဘယ်လောက်ထိ လိမ်ညာလှည့်ဖြားခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျမမျက်လုံးနဲ့ ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ် ဆိုတာသက်သေပြချင်လို့ ဒီဆိုင်ထဲဝင်လာတာပါလို့ အေးဆေးစွာပြောပြီး တွယ်တာလက်ကို ဆွဲကာဆိုင်ထဲမှ ကျောခိုင်းလှည့်ထွက် သွားခဲ့တယ်။
ဆိုင်ထဲကနေကျောပေး ထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက် သူ့...မမြင်ကွယ်ရာမှာ ကျမ တစ်ယောက်တည်း မျက်ရည်တွေ ကျခဲ့ရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အရမ်းအားနာသလို ရှက်လည်းရှက်သွားမိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ကျမ ကိုချစ်ပြီးစေတနာနဲ့ ပြောပြခဲ့တာတွေကို ကျမက အမြင်မှားခဲ့ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ်အပြစ်မြင်ခဲ့မိတာတွေ တွေးတွေးမိပြီး ဝမ်းနည်းလာသလို ရှက်လည်းရှက် ဒေါသ လည်းဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်။ ဒေါသထွက်မိတာက ...ငါ...တော်တော် အသုံးမကျဘဲ အယုံလွယ် ခဲ့ပါလား. ...လို့တွေးမိလို့ပါ....ဆိုင်ထဲမှာတော့....သူတို့ဘယ်လို ကျန်ခဲ့မယ်ဆိုကျမ မတွေးမိတော့ပေ။
ညဘက်ရောက်တော့ အစ်ကိုတစ်ယောက် .... ကျမဖုန်းကို ခဏခဏခေါ်ပေမဲ့ ...ကျမဖုန်းက ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပကို ရောက်နေခဲ့ပြီ။ တစ်ယောက်ထဲ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို စာရွက်တွေပေါ်ချရေးပြီး. .ကျေနပ်အောင် ငိုကြွေးလိုက်တယ်။ အစ်မတစ်ယောက်က ကျမကို ဆုံးမဖူးတယ်။ အချစ်အတွက်နဲ့ စိတ်ခံစားမှု့ဖြစ်လာခဲ့ရင် စိတ်ထင်တာတွေကို အလိုမလိုက်ဘဲ စာရွက်ပေါ်မှာ ရင်ထဲကခံစားချက်တွေ ချရေးပြီး ပုံးတစ်ပုံးထဲထည့် ကိုယ်မမြင်ကွယ်ရာ တစ်နေရာမှာ ထားလိုက်ပါတဲ့။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က ရူးသွပ်ခံစားမှုတွေကိ အသက် (၃၀)ကျော်လို့ တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်ချိန်ရောက်ရင် အဲဒီတစ်ချိန်က ကိုယ်ခံစားပြီး ရူးသွပ်ထားတဲ့ ပုံးလေးကိုပြန်ထုတ်ကြည့်ပါ။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ အရမ်းရီမောစရာတစ်ခု ဖြစ်လာမယ်လို့ ပြောဖူးတော့ ကျမလည်းခံစားချက်ကို သတိနဲ့ထိန်းရင်း မိုက်မဲတဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ဝေးရာမှာ ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကို စာရွက်မှာချရေး. ..တစ်ခန်းလုံး.. အပြည့်နံရံတွေမှာကပ် သုံးရက်တိတိငိုကြွေးပြီး ပေးဆပ်စွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။
ခုတော့ အဲဒီပုံးထဲက ကျမရဲ့ အလွမ်းလက်ကျန် လေးတွေကို ထုတ်ကြည့်မိတော့ ကျမ တစ်ချိန်က ရူးသွပ်ခဲ့တာတွေက ပြန်ပေါ်လွင်စေခဲ့သလို ရင့်ကျက်တည်ငြိမ် ချိန်ရောက်တော့ ဒီအမှတ်တမဲ့လးတွေ ဟာအမှတ်တရ ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။ အဲဒီချိန်တုန်းက (တွယ်တာ) ကျမ ကိုပြောခဲ့တဲ့ မှတ်မှတ်ရရ စကားလေးတစ်ခွန်းကတော့.... နင့်ကိုငါချီးကျူးတယ်.... ဆိုင်ထဲရောက်တော့ ငါ့မှာတော့ စိုးရိမ်လိုက်ရတာ နင်ပြသနာရှာပြီး ဆိုင်ထဲသောင်းကျန်ပြီ ထင်နေတာတဲ့။ တစ်ဆက်တည်း တွယ်တာက ဆက်ပြောသေးတယ်။ ငါသာဆို နင့်လိုတည်ငြိမ် အေးဆေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ကျမလည်း. ... တွယ်တာ့... ကိုပြန်ပြောခဲ့တာက ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမရှိ မချစ်မနှစ်သက်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်နောက်ကို ကျမ ဘယ်တော့မှ အပင်ပန်းခံပြီး ပြေးမလိုက်ဘူး။ ကျမက စွန်လွှတ်ရမှာကြောက်လို့ တွယ်ကပ်လေလေ သူက လွတ်လပ်တဲ့နေရာကို ထွက်ပြေးနေဦးမှာဘဲ။ သူလည်းပင်ပန်းသလို ကိုယ်လည်းပင်ပန်းတယ်တဲ့ အလုပ်မျိုးကိုကျမ မလုပ်ချင်ပါ။
တော်ရာမှာနေခဲ့ရတဲ့ဘဝနဲ့ဘဲ ကျေနပ်စွာနေခဲ့မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူပြေးလို့မောလာတဲ့ တစ်နေ့ ပန်းတိုင်ပျောက်ခဲ့ရင် နောက်ပြန်တော့ မလှည့်ခဲ့နဲ့ပေါ့လို့ တွယ်တာကို .. ကျမ.. ပြန်ပြောခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီနေ့ကစ သူနဲ့ကျမ ဝေးကွာလာခဲ့တာ ယ္ခုချိန်ထိပါဘဲ။ ကျမ သူကိုချစ်လို့ သူ့အလိမ်ညာခံ အနစ်နာခံ .. သူ.. ပြောသမျှ ယုံကြည်ခဲ့တာတွေကို သူတန်ဖိုးဖြတ်ခဲ့တယ်။ သူနောင်တရချင် ရနေမှာပါ။ ကျမကတော့ သူ့ပေးခဲ့တဲ့ ရင်ထဲကနာကျင်မှုတွေနဲ့ ဘဝကို ဆက်လက်ရှင်သန်လာခဲ့တာ ခုဆို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နေပါပြီ။ သူ.... ပေးခဲ့တဲ့ မာနတွေနဲ့ လှဲမကျအောင် ကျမဘဝလမ်းကိုထိန်းရင်း ဆက်လျှောက်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်း ကျမ ရင်ထဲကနေ သူ့ကိုလေးလေး နက်နက် ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။
သူ့ရဲ့ရက်စက်တဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် ခဏတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားရချိန်ခဏမှာတော့ သူဟာ... ကျမရဲ့ အမုန်းဆုံး လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာ မှန်ပေမဲ့.... အခု သူ ပေးခဲ့တဲ့ မာနတွေကြောင့် ကျမ လမ်းသစ်ကို မာနနဲ့ဖောက်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်း နေပါပြီ။ ဒီချိန်ရောက်လာတော့ တစ်ချိန်ကသူ ရက်စက်ခဲ့တာတွေကို အပြစ်လို့ မမြင်တော့ဘဲ သူ့ကိုမိတ်ဆွေကောင်း တစ်ယောက်လို သတိရနေမိပါတယ်။
(၁) စာဖတ်သူများရော တကယ်လို့ကျမလိုဘဲ ကိုယ်အရမ်းချစ်တဲ့ချစ်သူကို တစ်ခြားမိန်းခလေး တစ်ယောက်နဲ့ လူဘုံအလယ် တစ်နေရာမှာတွေ့ခဲ့မယ်ဆို စာဖတ်သူများဘယ်လို ဖြေရှင်းမှာလဲ။ ကိုယ့်ဘက်က အရမ်းချစ်ပြီး သူပြောသမျှယုံကြည် ကိုယ့်မိသားစု အပေါင်းသင်းထဲ ဝင်ဆံ့ခဲ့ပြီးမှ သူ့ဘက်ကခုလို သစ္စာမဲ့လာမယ်ဆို စာဖတ်သူများ ကြုံဆုံခဲ့မဲ့နေရာမှာ ကျမလိုဘဲ တည်ငြိမ်အေးစွာနဲ့ ဖြေရှင်းမလား..... ဒါမမဟုတ်.... အမေဂျမ်းနတ်ဝင်သလို သတိမဲ့စွာ အရှက်တစ်ကွဲဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းမှာလား.....
(၂) လောကမှာ ယောကျာင်္းတိုင်းကို မဆိုလိုသလို မိန်းမလည်းတိုင်းလည်း မရည်ညွှန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့သော သစ္စာမရှိတဲ့ ချစ်သူတွေကြောင့် သင်ဘဝကိုအရှုံးပေးပြီး အချစ်ထဲမှာဘဲ မျှောပါစီးဆင်း မှာလား။ မလုပ်သင့်တဲ့ အချစ်လူမိုက်ဇာတ်ကို ရေးသင့်သလား..... စာဖတ်သူဆိုရင်ကော.....
(၃) ကိုယ်ကအသက်ပေးပြီး ချစ်ခဲ့တာတောင် ကိုယ့်အပေါ် နည်းနည်းလေးမှ မကြင်နာတဲ့ ချစ်သူနောက်ကို သင်အပင်ပန်းခံပြီး ပြေးလိုက်မှာလား? .ရပ်နေတဲ့နေရာကနေ ရပ်နေပြီး သူထွက်ပြေးသွားတဲ့ သူ့နောက်ကျောပြင်ကို ငေးကြည့်ပြီး သူ့ဘဝအတွက် မေတ္တာစကားဆိုမှာလား. .... ဆဲဆိုနေမှာလား.... စာဖတ်သူဆိုရင်ကော.....
တကယ်တော့ အချစ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်လာပြီဆိုရင် ပြုပြင်ကိုင်တွယ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ တစ်ချို့က ကိုင်တွယ်ပြုပြင်လို့မရပါဘူး။ အဲလိုလူနဲ့ဆုံလာရင်လည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အပျက်စီးအခံဘဲ လက်လျော့ရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ..... ကိုးကွယ်ဘို့ ဘုရားတစ်ဆူ..... မဟုတ်သလို ကိုင်တွယ်အသုံးချတတ်ဘို့ တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်လေးများ အချစ်အတွက်ခံစားရပြီး ဘဝကိုတန်ဖိုး မမဲ့စေရန်အထူးသတိပြုပါ။
ပိုစ့်တင်သူ အလွမ်းမြို့ အချိန် 03:48